माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ कात्तिक २६ देखि बिक्री खुला – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ कात्तिक २६ देखि बिक्री खुला
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:४३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, माउण्टेन इनर्जी नेपालले १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । लागेको हो । सो आइपिओ कात्तिक २६ गतेदेखि निष्कासन हुने छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा १९ करोड ६८ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न लागेको हो ।
२ प्रतिशत ( ३९ हजार ३ सय ६१ कित्ता) कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशत (९८ हजार ४ सय १ कित्ता) सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ ।
बाँकी १८ लाख ३० हजार २६५ कित्ता सेयरका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन । यस आईपीओमा सर्वसाधारणले छिटोमा मंसिर २ गतेसम्म र त्यस अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभए ढिलोमा मंसिर १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यस आइपीओमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ र सीबीआइएल क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेका छन् ।
क्रेडिट रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ नेपालले यो आइपीओलाई ‘ग्रेड ४’ रेटिङ दिएको छ । यसले औसतभन्दा कम आधार जनाउँछ ।
कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसअघि यसले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित नुवाकोट र म्याग्दी जिल्लाका स्थानीयको लागि १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता आइपीओ बिक्री गरेको थियो ।
चौकुने खानी वर्षौंदेखि होल्ड
८ माघ २०७७, बिहीबार २३:०९ bampijhyala 0
अजय प्रधानबाँपीझ्याला, दोलखा । त्रिपुरा महिला सहकारी संस्थाको २५...
८ माघ २०७७, बिहीबार १९:४२ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक...
८ माघ २०७७, बिहीबार ०९:५६ bampijhyala 0
०८ माघ, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । आफूले गरिरहेको कुल आम्दानी...
९ माघ २०७७, शुक्रबार ०९:३२ bampijhyala
९ माघ २०७७, शुक्रबार ०९:२७ bampijhyala
चिकउलाकु क्वाकु लोखुन मोरलुईरी हात्त खतरनाक सिरगु रा ? १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:४३
खुगुर प्रजातीय न्हुल झागल थपई जुर १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:४३
प्रचण्ड–नेपाल पक्षद्वारा शुक्रबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन, १ लाख प्रदर्शनकारी उतार्ने दावी १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:४३
प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा खोई ? भनेर सोधेपछि महान्यायाधिवक्ता इजलासबाट गायब १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:४३
हप्तामा दुई दिन बिदा दिने योजना अन्योलमा १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:४३